Beddelaan & cadaadi Fraps Video inay MP4, YouTube, ama Size yar
Raadinayo in ay la wadaagaan natiijooyinka via Fraps gameplay aad diiwaan YouTube ama meelaha kale? Haddii ay tahay, waxaa laga yaabaa in aad ka heli dhegto la baaxadda file waaweyn iyo qaab incompatibility (Fraps video had iyo jeer waa in AVI) arrimaha. Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa video Converter xirfadle in ay si fudud u xaliyaan dhibaatadaada.
Hel a video Converter Fraps (30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan, ma qaab la dhaafi karin, & AAN tayada khasaaro)
• Beddelaan 150+ video ama ka AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, Jabbuuti, ECT.
• Beddelaan video Fraps in goobood oo kala duwan sida YouTube, Facebook, vimeo, iwm
• goo, dalagga, isku shaandheyn, iyo dar watermark ama saamaynta si aad video ka hor la wadaago.
• Gubashada Fraps video inay DVD wax qaybsi fiican iyo ilaalinta.
Sida loo Beddelaan iyo cadaadi Fraps Video
Tutorial hoose ayaa waxaa loogu tala galay dadka isticmaala Windows. Haddii aad tahay qof user Mac ah, akhri Sidee si loogu badalo Fraps Video for Mac .
1. dejinta video Fraps aad
Raac tilmaamaha ku-shaashadda si ay u gashato this. Ka dibna riix "Add Files" ama jiita iyo hoos u faylasha aad u.
2. Deji qaabab video sida MP4, YouTube ama vimeo
Riix falaarta ka hoos "Qaabka Output", guji "Web", ka dibna dooro YouTube ama vimeo. Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Video" in ay doortaan MP4.
Haddii aad guji "Device", waxaad ka heli doontaa qalab uu leeyahay presets u iPhone, iPad, ama Samsung, HTC iyo qalabka Sony.
3. cadaadi Fraps video in size yar (Ikhtiyaar)
Just guji "Settings" in ay isku dubaridi video & audio-beegyada uu u dhigay video Encoder, Rate jir ah iyo Rate Inyar.
4. Ku bilow si loogu badalo Fraps Video
Just riix badhanka badalo si ay u bilaabaan si loogu badalo video ah fraps. Haddii aad tahay si loogu badalo video qalabka la qaadi karo aad, kala iibsiga WiFi waxaa taageera qalab this.
Free Fraps Video Converter
Haddii aad rabto in aad kaliya caadi ah Fraps video Converter si loo gaadho oo aad diinta, kaliya akhri maqaalkan ku Top 10 FREE Video converters for Windows (Windows 10 ka mid ah). Dhammaan iyaga si fudud u sheegi kartaa in aad lacag la'aan ah loogu badalo video fraps in MP4, YouTube, ama qaababka iyo goobaha kale.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad daryeeli badan oo ku saabsan tayada video saarka, xawaaraha diinta iyo doonayaa ugu user qalab saaxiibtinimo la presets dheeraad ah, waxaad ka heli doontaa Video Converter Ultimate kor ku xusan.
> Resource > Beddelaan > Beddelaan & cadaadi Fraps video in MP4, YouTube, ama Size yar